Klopp ” Waxaan u maleynayaa inuu wax badan ka sameynayo kubadda cagta, waana xariif weyn”, tababaraha Liverpool oo amaanay mid kamida xiddigihiisa da’yarada, Waa kee? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Klopp ” Waxaan u maleynayaa inuu wax badan ka sameynayo kubadda cagta, waana xariif weyn”, tababaraha Liverpool oo amaanay mid kamida xiddigihiisa da’yarada, Waa kee?
Klopp ” Waxaan u maleynayaa inuu wax badan ka sameynayo kubadda cagta, waana xariif weyn”, tababaraha Liverpool oo amaanay mid kamida xiddigihiisa da’yarada, Waa kee?	Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaana amaan huwiyay, isagoona xusay in da’yarka Reds ee streetwise, lagu magacaabo uu yahay mid xirfad fiican leh, kadib markii bedel kusoo galay ciyaartii Chelsea ee todobaadkii hore.
kooxda Anfield ka dhisan ayaa barbardhac 1_1 ah la gashay wiilasha Antonio Conte bartamihii todobaadkii hore, inkastoo uu heysto Klopp ciyaartoy waa weyn, hadana waxaa lagu xantaa inuu yahay mid aad u jecel laacibiinta da’yarada ah.
Klopp ayaa haatan qiray inuu aad u jeclaan lahaa inuu arko kooxdiisa oo si wanagsan u ciyaareysa, ayna dib ugu soo laabato wadadii guulaha, oo ay Liverpool ku dhiban tahay inay gaarto guul tan iyo curashadii sanada 2017-ka.
“Haa, waxaan ku qasbanahay inaan wax badan ka aqaano streetwise”, ayuu u sheegay suxufiyiinta tababaraha reer Germany.
“Waxaan hubaa inuu noqonayo laacib weyn, ilaa iyo hadda wax wanaagsan ayuu ka sameynayaa kubada cagta. xariiftinimadu waa qeyb ka mid ah kubada cagta” ayuu hadalkiisa ku daray Klopp.
Reds ayey u ahayd bishii January bil mugdi ah, maadaama ay la kulantay guuldareeyin iyo barbaro is xig xiga, iyadoona hadda 10 dhibcood ka danbeeyaan kooxda hogaanka u heysa horyaalka ee Chelsea, waxayna ku jirtaa kaalinta afaraad.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/klopp-waxaan-u-maleynayaa-inuu-wax-badan-ka-sameynayo-kubadda-cagta-waana-xariif-weyn-tababaraha-liverpool-oo-amaanay-mid-kamida-xiddigihiisa-dayarada-hadaba-waa-kee/">Klopp ” Waxaan u maleynayaa inuu wax badan ka sameynayo kubadda cagta, waana xariif weyn”, tababaraha Liverpool oo amaanay mid kamida xiddigihiisa da’yarada, Waa kee?</a>